राजीव गान्धी हत्याका दोषीलाई जेलबाट रिहा गर्दै « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2022 May 18, 1:28 pm
एजेन्सी, ४ जेठ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार ठूलो फैसला सुनाएको छ । ३१ वर्षदेखि जेलमा रहेका हत्यारा ए.के. हो. पेरारिवलन रिहा भएका छन् । पेराभिलनले मानवताको आधारमा यस विषयमा निवेदन दिएका थिए ।
२१ मे १९९१ मा तमिलनाडुको श्रीपेरुम्बदुरमा बम विस्फोटमा राजीव गान्धीको हत्या भएको थियो। विष्फोटमा प्रयोग भएका दुईवटा ९ भोल्ट ब्याट्री किनेर मुख्य अपराधी शिवरासनलाई दिएको आरोप लगाइएको थियो । पेरारिवलनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पेरारिवलनलाई रिहा गर्न धारा १४२ को प्रयोग गरेको छ। यस अन्तर्गत अदालतले कुनै पनि अवस्थामा पूर्ण न्यायको लागि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दछ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारले कानुन नमान्ने हो भने आँखा चिम्लिन नसक्ने बताएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गभर्नरले मान्न बाध्य हुने पनि बताइए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजीव गान्धी हत्याकाण्डका दोषी पेरारिवलन एक मुद्दामा अदालत जाँदै थिए।
पेरारिवलनलाई टाडा अदालतले सन् १९९८ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। सन् १९९९ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त सजायलाई कायम राखे पनि २०१४ मा जन्मकैदमा परिणत भएको थियो । राहत नपाएपछि पेरारिवलन र अन्य दोषीले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । दोषीहरूले १६ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भोगेपछि पनि अन्य दोषीहरू जस्तै छुटबाट वञ्चित भएको तर्क गरेका छन् । अहिलेसम्म उनले तीन दशक लामो जेल सजाय भोगिसकेका छन् ।